प्रोल्लासको जन्मजात बाहुनको विज्ञप्तिमा वर्गीय पक्ष प्रबल::RATONEWS
कबि प्रोल्लास सिन्धुलीयको कविता संग्रह ‘जन्मजात बाहुनको विज्ञप्ति’ सार्वजनिक भएको छ। उपन्यासकार समेत रहेका सिन्धुलीयको कविता संग्रह डा. नवराज लम्साल, श्यामल, कुमारी लामा र मणि शर्माले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कुनै समय विवाद आएको कविताको बिषयमा कवि श्यामल र साहित्यकार डा. नवराज लम्सालले सिन्धुलीयका कविताले जातियता नभई मानवतालाई छोएको टिप्पणी गरे। बक्ताहरुले जातीय संकीर्णताभन्दा वर्गीय पक्षधरतातिर सिन्धुलीका कविता अघि बढेको दाबी गरे । तर लेखक कुमारी लामाले भने जातीय पहिचानलाई चटक्कै बिर्सने ध्येय मनासिव नहुने तर्क राखिन्। कवि सिन्धुलीयले आफ्ना कवितालाई बाहुनवादसँग जोडेर हेर्नु गलत भएको दावी गरेका थिए।